lundi, 01 novembre 2021 17:38
Fanondranana lavanila : Tsy hahazo taratasy fahazoan-dalana intsony ireo tsy mahafeno ny fepetra sy ny fitsipika rehetra napetraka
Nisy ny fihaonana mivantana teo amin’ny mpitondra fanjakana notarihin’ny filoha Andry Rajoelina tamin’ireo solontenan’ireo mpisehatra isan-karazany eo amin'ny seha-pihariana lavanila ao SAVA, dia ireo tantsaha mpamokatra, ireo mpanangom-bokatra ary ireo mpanondrana izany.
Fihaonana notanterahina tao Antalaha nandritra ny fitsidihana ny Faritra SAVA izay tanterahin'ny Filohan'ny Repoblika ny 30 oktobra 2021.
Nisy ny fehin-kevitra nifanekena fa ho raisina manomboka izao mba hiarovana io seha-pihariana io. Anisan’izany ny famerana ny vidin’ny lavanila manta tsy ho latsaky ny 75 000 Ar, mba tsy hanaovana tsindrio fa lavo ireo tantsaha mpamboly.
Tsy misy mpisehatra tokony ho latsa-danja eo amin’ity seha-pihariana ity, ary tokony hahita tombony avokoa na iza na iza hoy hatrany ny Filoha.
Ireo raharaham-barotra rehetra dia tokony horaketina an-tsoratra ary hambara ao ny anaran’ny mpividy sy ny vidiny nandraisana izany.
lundi, 01 novembre 2021 15:27
Ampanefena - Vohémar : Delegem-panjakana sy Sefo Fokontany voarohirohy amina halatr’omby
Olona miisa dimy no voasaringotra amina halatr’omby, ka anisan’izy ny delegem-panjakana sy ny Sefo Fokontany ao Ampanefena Vohémar. Niaiky ireto roa farany fa voafitak'ireo mpangalatra.
Raha iverenana ny tantara, dia niainga tamina antso tamin'olona tsara sitrapo voarain’ny Zandary ao amin’ny Poste Avancé Anjangoveratra ny marainan’ny 26 oktobra 2021, fa misy olona mitondra omby mampiahiahy mandalo eo anelanelan'ny lalana Ambodisambalahy sy Ambavala, ao anatin'ny Kaominina ambanivohitra Anjangoveratra Distrikan’i Sambava, amin'ny lalam-pirenena faha 5A, mampitohy ny Distrikan’i Vohémar sy Sambava.
Nidina haingana tamin'io toerana io ny Zandary efa-dahy, ka tratra tao ny omby vositra miisa telo. Roalahy no nandroaka an'ireo omby ireo. Nilaza ireo fa manatitra ny omby hatrany Sambava fotsiny izy roalahy, fa mandeha taxi-brousse avy any Ampanefena ny olona tena mahalala ny omby, ary any aminy daholo ny taratasy rehetra.
Nataon’ny Zandary ny velam-pandrika dia voasambotra ny androtr’io ihany, tao anaty taxi-brousse ilay olona voalaza fa mahafantatra ny omby.
lundi, 01 novembre 2021 15:26
COP26 : Hitarika ny delegasiona any Glasgow ny filoha Andry Rajoelina
Misokatra anio 1 novambra 2021 hatramin'ny 12 novambra izao, any Glasgow tanan-dehibe iray amoron-drano any Écosse, ny COP26 na ny fivorian'ny Firenena Mikambana faha-26 mikasika ny toetr’andro.
Handray anjara amin'izany ny Filoham-pirenena Andry Rajoelina, sy ny delegasiona Malagasy izay tarihiny.
Handray anjara amin'izao fivoriana lehibe izao avokoa ireo filoham-pirenena sy filoham-panjakana maro izay nanao sonia ny fifanarahana lasitra na ny "convention-cadre" an'ny Firenena Mikambana mikasika ny fiovaovan'ny toetr’andro.
Ity fivoriana faha-26 ity dia tarihin'ny fanjakana britanika, ary i Alok Sharma no Filoha mpitarika ny fivoriana, izay efa sekreteram-panjakana britanika nisahana ny Fandraharahana, ny Angovo ary ny Paikady ara-indostrialy.
lundi, 01 novembre 2021 13:12
Lozam-pifamoivoizana : Lehilahy iray nitaingina biskileta maty nifandona tamin’ny Sprinter
Nitrangana lozam-pifamoivoizana teny Ambohimanabe-Andraikiba amin’ny lalam-pirenena faha-34 ny harivan'ny alahady 31 Oktobra 2021.
Fiara mpitatitra an'ny Kaoperativa Kofibe no nifandona tamin'ny lehilahy iray nitondra biskileta, nidina ho any Antsirabe, ary nifatratra tamin'ilay Sprinter.
Raha ny fahitana ny loza dia mafy ny fifandonana satria dia nandriaka ny rà, ary potika tanteraka, na ilay biskileta na ilay fiara, ary voalaza fa tsy tonga teny amin'ny hopitaly akory ilay lehilahy dia nindaosin'ny fahafatesana.
Raha ny fanazavana nomen'ny mponina moa dia toa avy nanao baolina tany andrefandrefana tany ilay niharan-doza io, ka tsy fantatra na noho ny fitarafan'ny jiron'ny fiara na inona no nahatonga izao loza izao.
lundi, 01 novembre 2021 13:08
Morondava Menabe : Tafakatra folo ankehitriny olona mitondra ny Covid-19
Miha-miakatra ny salanisan'ny olona mitondra ny aretina Covid-19 ao an-drenivohitry ny Faritra Menabe. Efa folo ankehitriny raha ny tati-baovao no tranga voamarina ao an-toerana.
Any an-toerana amin’izao ny minisitry ny Fahasalamam-bahoaka Randriamanantany Zely Arivelo, ary nihaona mivantana tamin'ireo mpiasan’ny fahasalamana sy ny tompon'andraikitra ao an-toerana mba hamaritana sy hanamafisana ny andraikitry ny tsirairay.
lundi, 01 novembre 2021 12:19
Safira : Madagasikara ny miantoka ny 40% n'ny vokatra maneran-tany
25 300kg isan-taona ny safira voatrandraka sy ahondran'i Madagasikara isan-taona, na 72kg isan'andro.
Madagasikara no mitana ny laharana faharoa aorian'i Astralia amin'ity vato manga ity.
Atao firavaka ny safira, misy ihany koa ireo olona mpandeha no mitana azy ho fiarovana amin'ny pesta, ny ratra, azahoana fiadanan-tsaina ho an'ny hafa.
Natao fitsaboana areti-maso izy tamin'ny andron'ny Ejipsianina fahiny.
Arakaraky ny hatsaran'ny vatosoa, dia mitentina 1 350 000ar- 9 000 000ar (300 - 2000Euro) ny Carat any ivelany.
Amin'ny vatosoa, 1Carat = 200mg, izany hoe 5Carats = 1gramme.
Raha volamena kosa izy, dia 1Carat milaza fahadiovana 1/24 ny lanjany manontolo. Ka raha volamena 18Carats izany dia misy volamena 18/24 izany ao, fa raha 24Carats izy, dia 24/24 izany volamena avokoa, izany hoe volamena tsy misy fangarony na "pur or", tsy misy alliage na fangarony, toy ny varahana ao anatiny.
lundi, 01 novembre 2021 11:08
Fisokafan'ny sisin-tany : Manenjana i Israel raha malefaka kokoa ny any Thaïlande
Taorian'ny fikatonan'ny sisin-tany rehetra maneran-tany ho fiarovana amin'ny valanaretina Covid-19, dia nanomboka nanokatra ny sisin-tany avy ireo firenena lehibe manomboka ity 1 novambra 2021 ity, indrindra ireo mivelona amin'ny indostrian'ny fizahan-tany toa an'i Israely sy Thaïlande.
Mahery vaika anefa ny fepetra any Israely satria dia tsy maintsy vita vakisiny, neken'ny OMS, latsaky ny 6 volana vao afaka miditra any. Misy mihitsy aza no takiana ny fahavitana vakisiny telo. Misy lisitr'ireo firenena sokajiana volom-boasary raha mbola mampiahiahy, ary lisitra mena ho an'ireo atahorana mbola iaingan'ny aretina.
Ny atsy Thaïlande kosa dia tsy maintsy vita vakisiny Covid ihany koa, saingy manao test PCR 72ora alohan'ny hidirana any an-toerana, ka mihiboka 14andro raha tsy vita vakisiny.
(Sary nindramina Thaïlande)
lundi, 01 novembre 2021 10:25
Elanelan'ora : 2ora ny elanelan'i Madagasikara sy Eoropa
Nanomboka ny alahady 31 oktobra 2021, dia niditra amin'ny oran'ny ririnina ny any Eoropa, ka lasa 2ora ny elanelan'ny ora eto Madagasikara sy any Frantsa.
Raha amin'ny 11ora atoandro aty Madagasikara dia amin'ny 9ora maraina ny any Frantsa.
Mbola mipetraka adi-hevitra ny fanafoanana ity fanovana ora ity any Eoropa, raha heverina fa tsy ampiharina intsony izany manomboka ny taona 2023-2024.
Ny anton'izy io dia resaka fitsitsiana herinaratra hatrany, satria rehefa ririnina any Eoropa dia mbola maizina be amin'ny 9ora maraina izany, ka aleo aloha ny olona matory fa tsy hiasa anatin'ny haizina ka andrehitra jiro.
Ka nampifandraisina ny fiposahan'ny masoandro sy ny fanombohan'ny ora fiasana.
Nanomboka ny taona 1975 ny tany Frantsa no nanomboka nanova ny ora, taorian'ny fidangan'ny vidin'ny solika. Raha ny fanadihadiana dia mahatratra 440GWh ny fitsitsiana herinaratra azony amin'ity fanovana ora ity.